Roy Keane oo afka furtay xilli uu ka dhawaajiyey waxa uu jecel yahay inuu dhawaan noqda | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Roy Keane oo afka furtay xilli uu ka dhawaajiyey waxa uu jecel yahay inuu dhawaan noqda
Roy Keane oo afka furtay xilli uu ka dhawaajiyey waxa uu jecel yahay inuu dhawaan noqda
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 11-06-16 12:36 PM Caawiyaha Macalinka xulka qaranka dalka Ireland Roy Keane ayaa sheegay inuu weli maanka ku hayo inuu jecel yahay inuu macalin u noqdo koox un.
Horaantii todobaadkan ayey macalinka xulka Ireland Martin O’neill iyo Roy Keane ka hadleen mustaqbalkooda xulka dalka Ireland, wallow uu Roy Keane sheegay inuu jecel yahay inuu cabaar lasii joogo xulka dalkiisa Ireland.
“Waa inaan sugaa oo aan fiiriyaa waxa uu noqon doono xaalka, balse waxaan jeclahay inaan sii joogo halkan oo aan leyliyo xulkeyga, hadii aan fursad ka helo koox ma diidi doono”.
“Waxaan ahay 44 sano jir waxaana jeclahay inaan ku laabto halkaas [Koox], markii aan horey u dhahay waxaan jeclahay inaan ku laabto mar un, ma dhihi doono hada ayaan badalayaa qorshaheyga, sanadaha soo socda ayaan sugayaa waxa dhici doono”.
waxaa xusid mudan in Xulka Jamhuuriyada Ireland ay maalinta isniinta kulankooda furitaanka koobka qaramada Yurub ay la ciyaari doonaan xulka dalka Sweden.